အသင့်စား အစာတွေfast food တွေက သင့်ကို ကလေးမရတာ ဖြစ်စေနိုင်သလား - Hello Sayarwon
Dr. Thiha Phyo Myint မှ ရေးသားသည်။ 13/10/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကလေးမရနိုင်တာဟာ အိမ်ထောင်သည်အများစုအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ပြဿနာ တခုပါ။ သင့်ဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကလေးမရနိုင်တဲ့ စုံတွဲတွေကို သင်တွေ့မိမှာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ကာလတွေတုန်းက ကလေးမရနိုင်ဖူးဆိုတာ အင်မတန်ရှားပေမယ့် လက်ရှိအချိန်မှာတော့ စုံတွဲငါးတွဲမှာ တတွဲဟာ ဒီပြဿနာနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဆောင်းပါးမှာ သဘာဝအတိုင်း ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ဖို့အတွက် သိထားဖို့လိုတဲ့ သတင်းလေးတွေ နဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို သင်ရှာဖွေ ဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဆောင်းပါးမှာ အခုကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးချင်တာက လက်ရှိခေတ်ရဲ့ ကံအကောင်းဆုံးလို့ ပြောလို့ရသလို ကံအဆိုးဆုံးလို့လည်း ပြောလို့ရတဲ့ အချက်ကိုပါ။
အသင့်စား အစာတွေ (ကြက်ကြော်၊ဟမ်ဘာဂါ၊အာလူးကြော် စတာတွေပေါ့)ဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့အပြင် ဈေးလည်း ပေါလှတယ်ရယ် မဟုတ်တဲ့အတွက် မစားကြပါနဲ့လို့ ပြောတာတွေကို သင်မကြာခဏ ကြားကောင်းကြားမိပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အတော်များများဟာ ကြက်ကြော်တို့၊ဘာဂါတို့ကို အပြစ်မမြင်ဘဲ အချစ်တွေသာတဖွားဖွားဝင်ပြီး အခွင့်ကြုံလည်းစား၊မကြုံလည်း ကြုံအာင်လုပ်ပြီး စားလေ့ရှိကြပါတယ်။ ကြက်ကြော်စားမလား ဒါမှမဟုတ် ဘာဂါလေး၊အာလူးချောင်းကြော်လေးစားရအောင်လေ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တွေခမျာ ငြင်းဆန်နိုင်စရာ စွမ်းအားတွေမရှိ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။
အမေရိကန်နဲ့ စပိန်ပညာရှင်တွေ ပူးပေါင်းပြုလုပ်တဲ့ လေ့လာချက်အသစ်တခုအရ ဒီလို အစားအစာမျိုးတွေ အထူးသဖြင့် trans fat လို့ခေါ်တဲ့ အဆီတမျိုးပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေဟာ ကျန်းမာသန်စွမ်းငယ်ရွယ်တဲ့ အမျိုးသားတွေရဲ့ သုတ်ကောင်တွေကို ထိခိုက်စေတဲ့အတွက် ကလေးမရအောင် နှောင့်ယှက်တယ်လို့ တွေ့ရှိရပါတယ်။
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်နဲ့ စပိန်အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ မာစီယာ တက္ကသိုလ်က မျိုးပွားဗေဒအထူးပြုဆရာဝန်တွေပူးပေါင်းပြီး အသက် ၁၈နှစ်ကနေ ၂၂နှစ်ကြား အရွယ်ရှိတဲ့ အမျိုးသားတွေရဲ့ သုတ်ရည်တွေကို လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ စာဖတ်သူခန့်မှန်းမိတဲ့အတိုင်းပါပဲ အသင့်စား အစာတွေစားလေ့ရှိသူတွေရဲ့ သုတ်ကောင်တွေဟာ အာဟာရမျှတပြည့်စုံစွာ စားလေ့ရှိသူတွေရဲ့ သုတ်ကောင်တွေလောက် အရည်အချင်းမပြည့်မှီဖူးလို့ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
တခုသိထားရမှာက ဒီလေ့လာမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားတွေ အားလုံးဟာ ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းကြသူတွေချည်းဖြစ်ကြပြီး သူတို့ရဲ့ မျိုးပွားနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေနိုင်မယ့် တခြားဘာရောဂါမှလည်း မရှိကြပါဖူး။
အံ့ဩစရာ တွေ့ရှိရတာကတော့ trans-fat တွေ အမြောက်အများပါဝင်တဲ့ အသင့်စား အစာတွေကို စားလေ့ရှိသူတွေရဲ့ သုတ်ကောင်တွေဟာ ဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်နေပြီး ဒီအတိုင်းသာ ဆက်ပြီးစားသွားမယ်ဆိုရင် မျိုးမအောင်တဲ့အထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ကြက်ကြော်၊ဟမ်ဘာဂါတွေကြောင့် မျိုးမအောင်နိုင်တဲ့ ကိစ္စ
အခုချိန်ထိ ကျွန်တော်တို့သိထားတာက ဒီလို အစားအစာတွေဟာ ဆီးချိုဖြစ်စေတယ်၊ကိုလက်စထရောတက်စေတယ်၊အဝလွန်စေတယ် စတာတွေကြောင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်ဖူးဆိုတာတွေပါ။
ဒါပေမယ့် ဒီလေ့လာမှုအရ သင်ကြိုက်လှပါချည်ရဲ့ဆိုတဲ့ ကြက်ကြော်တို့၊ဟမ်ဘာဂါတို့ဟာ ကလေးမရအောင်ပါ နှောင့်ယှက်တားဆီးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဖြစ်နိုင်တာကတော့ ဒီလိုအစားအစာတွေအများစုမှာ ပါဝင်လေ့ရှိတဲ့ မျိုးဗီဇပြုပြင် ပြောင်းလဲထားတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကြောင့်လို့ ထင်မြင်ယူဆရပါတယ်။
ဓါတုဗေဒနည်းနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အသားတွေ၊e-cigaretteမှာထည့်ရတဲ့ အရည်တွေ၊ ဆီလီကွန်ရင်သားတုလုပ်ရာမှာ သုံးတဲ့ ပစ္စည်းတွေအပြင် မျိုးဗီဇပြုပြင် ပြောင်းလဲထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ချစ်လှစွာသော အသင့်စား အစာတွေဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၈ခုနှစ်က ဩစတျေးလျပညာရှင်တွေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသနတစ်ခုအရ GMO လို့အတိုကောက်ခေါ်တဲ့ မျိုးဗီဇပြုပြင်ထားတဲ့ အစားအစာတွေဟာ မျိုးပွားအဖွဲ့အစည်းကို ထိခိုက်စေတဲ့အတွက် မျိုးမအောင်တာ(ကလေးမရတာ)ကို ဖြစ်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီတွေ့ရှိချက်ဟာ အသင့်စား အစာတွေဟာ ဘာလို့ သုတ်ကောင်အရည်အသွေးနဲ့ မျိုးပွားအဖွဲ့အစည်းကို ထိခိုက်စေသလဲ ဆိုတဲ့ အဖြေကို ကောင်းကောင်းကြီးပေးထားပါတယ်။ ကြက်ကြော်တို့၊ဘာဂါတို့လို အသင့်စား အစာတွေအများစုမှာ GMO တွေ ဖောချင်းသောချင်း ပါဝင်နေလို့ပါပဲ။
နယူးယောက်တက္ကသိုလ် အစားအသောက်နဲ့ အာဟာရဗေဒ ဌာနက ပါမောက္ခ Marion Nestle က ဒီလို အသင့်စား အစာတွေဟာ နေ့စဉ်ပုံမှန်အမြဲတမ်းစားဖို့ ဘယ်တုန်းကမှ မရည်ရွယ်ခဲ့တာကြောင့် ပုံမှန်မစားသင့်ဖူးလို့ဆိုပါတယ်။
ကျန်းမာရေးကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ အရာတွေထဲမှာ အသင့်စား အစာတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အန္တရာယ်အများဆုံး ဖြစ်လာနေပါပြီ။ ဒီအစားအစာတွေမှာ ကယ်လိုရီပါဝင်နှုန်းမြင့်မားတဲ့အပြင် ဆားနဲ့ တခြားဓါတုပစ္စည်းတွေပါဝင်နှုန်းလည်း များပြားပါတယ်။
သင်သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ စက်ရုံထုတ် အစားအစာတွေထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတွေဟာ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေပြီး ရောဂါမျိုးစုံကို ဖြစ်စေတဲ့အပြင် သဘာဝအတိုင်း ကိုယ်ဝန်မရနိုင်အောင်လည်း တားဆီးပိတ်ပင်ပါလိမ့်မယ်။
Fast-food eaters have higher levels of chemical that may cause infertility, study shows.
http://www.scmp.com/lifestyle/health-beauty/article/1936083/fast- food-eaters- have-higher-levels-chemical-may- cause
Junk Food Shown To Make Men Infertile. http://naturalsociety.com/fast-food- makes-men-infertile/
INFERTILITY | IS FAST FOOD LINKED TO CAUSE INFERTILITY? | NEW YORK.
http://pregnancywellnesstips.com/infertility-is- fast-food- linked-to- cause-infertility- new-york/
Can Food Make You Infertile? Foods to Eat and Avoid.
http://www.thedailybeast.com/articles/2011/12/09/can-food- make-you- infertile-foods- to-eat-and-avoid.html
အသင့်စားခေါက်ဆွဲတွေကို ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ